"CRYSTAL": SHARAXAAD KA MID AH BACRIMIN IYO HABKA LOO ADEEGSANAYO HALABUURKA - SOOSAARKA DALAGGA
"Crystal": sida loo isticmaalo bacrimin dalagyo kala duwan
Qayb muhiim u ah nafaqada dhirta waa qaybaha macdanta. Ciidda had iyo jeer ma laha qadar ku filan oo ah walxo macdan, sidaas darteed waxay u baahan yihiin in la soo saaro farsamo. Qadar yar oo bacrimin ah ayaa si buuxda u buuxin kara nafaqada dhirta, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu wax ku oolka ah ee la xaqiijiyay waa "Crystal".
"Crystal" - Taxanaha kala duwan ee bacarimiso, oo ka kooban noocyo kala duwan oo Bacriminta, oo ku dhegay macdanta kakan.
Halabuurka noocyada la soo bandhigay ee daroogada waxaa lagu gartaa jaangooyo iyo xoojin waxyaallaha yaryar iyo macro, taas oo lagama maarmaan u ah koritaanka iyo horumarinta dhirta kala duwan ee beeraha.
Diyaargarowgu waa mid caalami ah, waxaana loo isticmaali karaa labadaba dalagyada miraha, iyo dhirta beeraha. Dhararku waxay awood u leedahay in ay bixiso quudin ku filan dhamaan noocyada beerto. Bacrimiyadu waxay ku timaadaa qaabka kristantaroolka, si fududna u foori kara biyaha, taas oo caddaynaysa fududaynta isticmaalka. Naqshadeynta codsiga rootiga iyo foliar.
Halabuurka "Crystal" chlorine laguma darin, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in ay ka fekerayso inay ka badbaado marka laga reebo Bacriminta kale ee chlorinated. Tilmaamyada raadraaca waxay ku jiraan qaabka chelate, taas oo macnaheedu yahay in lagu daro arrimo dabiici ah. Taas awgeed, geeddi-socodka isugeynta nafaqada dhirta ayaa si sahlan u shaqeynaya.
Ma taqaanaa? Dhammaan noocyada daawadani kuma jiraan chlorine in ay ka kooban, sidaas darteed iyagu ma xiro ciidda oo ha joojin dhirta.
Halbeegga macdanta ayaa si fiican u dheelitiran oo dhameystiraya midba midka kale, taas oo siinaysa isticmaalka bacriminta waxtarka sare. Dhisid:
Qalabka NPK: Qeybta ugu weyn ee walxaha ee dhammaan marxaladaha koritaanka waa seddex trim oo ah nitrogen, fosfooraska iyo potassium;
Microelements waxay muhiim u tahay beerista noocyada kala duwan ee dalagyada: copper, boron, birta, manganese, zinc, molybdenum.
Waxaa jira iib ah noocyo badan "Crystalone", taas oo ku sifoobeysa heerka xaddiga walxaha walxaha ku jira. Waayo-aragnimo sare waxay u baahan tahay xulashada saxda ah ee daroogada si loo quudiyo dalagyada qaarkood. Baakad kastaa waa inay lahaataa tilmaamo loogu talagalay isticmaalka iyo magacaabida nooca bacriminta.
Crystal Yellow - bacrimin ku habboon dhoobada, carrada qoyan. Xidhmada waxay muujineysaa astaanta jaalaha ah. Waxaa loo adeegsaday xoojinta iyo koritaanka nidaamka xididka iyo qaybta dhulka ee dhaqanka.
Waa muhiim! Bannaanka u khibrad leh waxay ku talinayaan in lagu daboolo nooca hurdiga ah ee dharka sare ee xaaladaha cimilada qaboobaha iyo qoyan ee dabiiciga ah iyo ciidda dhexdhexaad ah ama alkaliin ah. Noocyada noocan ah ee bacriminta waxay kordhisaa caabbinta dhirta si loo helo jawi aan fiicnayn.
Casaan "Crystal" waxay ka caawisaa hagaajinta ubaxyada iyo kordhinta dhirta. Waxaa lagu talinayaa in lagu quudiyo strawberries, dhirta qumbaha iyo bocorka.
Blue "Crystalon" waxay quudineysaa dhammaan dalagyada beeraha ka hor xilliga ubax. In qeyb ka mid ah saamiga siman ee nitrogen iyo potassium.
Cadaan "Crystal" inta badan wuxuu ka kooban yahay xeryahooda potassium. Dharka ugu sareeya ubaxyada iyo khudaarta inta lagu jiro ubax.
"Special" ama cagaaran "Crystal" - bacrimin, oo leh dhammaan walxaha kiimikada lagama maarmaanka ah. Waxaa ku jira xaddi badan oo nitrogen, walxo ay ku jiraan potassium iyo fosfooraska. Waxay keentaa horumar firfircoon ee nidaamka xididka.
Caleenta muuqaalka caleenta ee caleemaha dhirta ka dib.
Brown Crystalon buufin caleenta xagaaga. Waxtarkeeda waxaa lagu caddeeyey carrada ciidda iyo podzolic-soddda oo leh yaraanta potassium.
Cucumber lagu taliyey for quudinta dalagyada bocorka.
"Scarlet" Crystal waxaa ku jira xaddi weyn oo magnesium ah. Noocadani waa mid gaar ah waxaana loo isticmaalaa dhamaan noocyada dhirta beeraha.
Ma taqaanaa? Khubarada ayaa muujiyey in alaabta la daaweeyay Crystalon ay tahay mid degan deegaanka. Harvest waxaa loo isticmaali karaa soo saaridda cunnuga cunnada. Ka sokow hagaajinta koritaanka iyo midhaha beeraha beeraha, daawadani waxay awood u leedahay inay horumariso difaacida warshadaha cudurada qaarkood iyo fangaska.
Hababka loo adeegsanayo halbeegyada dhaqamada kala duwan
Qiyaasta saxda ah ee bacriminta waxay ku xiran tahay habka quudinta waxaana lagu tilmaamaa xirmooyinka daroogada. "Crystal" waxaa loola jeedaa Bacriminta oo isticmaala noocyo kala duwan oo loo isticmaalo wax soo saarka dalagyada kala duwan. Wixii geedo
Geedo waxay leeyihiin baahi ba'an oo loogu talagalay dib u soo celinta, iyada oo ay ugu wacan tahay tiro ku filan oo raad raac ah oo ku filan oo ay ku jiraan horumarin buuxda oo dhaqanka ah, oo ah tiro tiro badan oo cagaaran iyo sameynta xididada.
Iyadoo yaraanta walxahan, geedo wiiqay oo laga yaabo in ay dhintaan. Ugu horreyntii, waa lagama maarmaan in la isticmaalo bacrimin adag oo "Crystalone", oo leh walxo macdan oo dheellitiran.
Soo ogow siyaabaha xiisaha leh ee aad u karin karto basbaaska, strawberries, canab, basasha, yaanyada, sarreen qaboobaha.
Fiiri Yellow si toos ah u codso ka dib markaad qaadato xoojinta xididada. Dheeraad ah, taas oo ku xidhan beeritaanka geedo, waxaa haboon in la doorto mid ka mid ah Bacriminta:
caddaan loo isticmaalo koritaanka guriga iyada oo aan la isticmaalin ilo macmal ah ee iftiinka;
marka la isticmaalayo laydhka, waxaa fiican inaad doorato buluug;
casaanka loo baahan yahay heerkulka sare iyo iftiinka saboolka.
Dharka la soo xulay waa in loo isticmaalaa waraabin kasta. Fiirinta xalka ayaa ah 0.2%, heerka 2 g halkii 1 litir oo biyo ah. Habkani wuxuu siin doonaa fursad ah inuu koro geedo wanaagsan, kaas oo lagu beeray dhulka.
Waxaa loo tixgeliyaa quudinta foliarinta ee waxtarka leh ee basasha. Bacriminta waa in ay ku jirtaa boqolkiiba sare ee fosfooraska, potassium iyo nitrogen, sidaa daraadeed wax soosaarka ugu fiican waa cagaaran "Crystal". Qiyaasta codsiyada qiyaasta waxaa lagu sameeyaa heerka 3 g ee daroogada halkii 1 g.
Waxaa lagama maarmaan ah in la dalbado bacrimin 2 jeer leh mudo ah 2-3 toddobaad. Nidaamku wuxuu dhacaa bilaha ugu horreeya kadib markaad qaadato basasha.
Hirgelinta "Crystal" ee yaanyada waxay keenaysaa faa'iidooyin badan, qalabka waxaa lagu sameeyaa horumarinta dhaqanka.
Miraha yaanyada, kuwaas oo si joogto ah loo bacrimiyey, koraan ballaaran oo dhadhan wanaagsan. Xalka waxaa la diyaariyaa iyadoo lagu saleynayo 1 hektar oo ah 2 kiilo oo bacrimin ah. Guryaha gaarka loo leeyahay, waxaa loo isticmaalaa qiyaasta 2 garaam oo kristaan ​​ah 1 litir oo biyo diirran ah.
Codso ka hor ubax buluug "Crystal", bilowga ah muuqaalka kore ee burooyinkeeda - cad, oo leh samaynta miraha - casaanka.
Waa muhiim! Cunto-yari waxay ku talinayaan in lagu beddelo xayawaanka foliar beddelka daaqsinka ka yimaada cudurrada iyo cayayaanka, taas oo u oggolaanaysa yaanyada inay si fudud u dulqaadan karaan daaweynta kiimikada.
"Crystal" ee dhirta gudaha waxaa loo baahan yahay si la mid ah sida dalagyada. Go'doomin waxay hagaajinaysaa lakabyada cagaaran, iyo ubaxu wuxuu kordhiyaa muddada ubaxyada. Geedaha waxay noqdaan kuwo xoog badan oo caafimaad leh oo si fudud u dulqaadan kara dhalmo ama ku-tallaalid. "Crystal" waa karti hagaajinta difaaca xayawaanka waxayna yaraynaysaa u nugulnaanta cudurrada kala duwan.
Inta badan la isticmaalo:
Yellow keena dib u gurasho ama dib u soo celin ubax. Waraabinta waxaa la sameeyaa inta lagu jiro bilaha ugu horeeya iyada oo xal daciif ah oo ah 0.5-1 g halkii litir oo biyo ah heerkulka qolka. Inta lagu jiro hal bil, kobaca xidid waa la kiciyaa. Bacrimin dheeraad ah ayaa aad u yar.
Dhirta caleenta geedo ayaa u baahan baahida halabuurka "Crystal". Ku saabsan baahida loo qabo dharka waxay kuu sheegi doonaan muuqaalka muuqaalka bogagga, waxay noqdaan kuwo jilicsan oo lumiyo iftiinka midabka. Xisaabinta xalka: 1 g oo ah bacriminta halkii litir oo biyo ah.
Wixii dhirta ubax ee Bacriminta ubax muddada dheer iyo midab leh waxay ku habboon yihiin content nitrogen hoose laakiin awoodda fosfooraska sare iyo potassium sare. Casaan "Crystal" waa ikhtiyaarka ugu haboon ee quudinta waxaana lagu sameeyaa qiyaasta 0.8 g halkii 1 litir.
Succulents iyo cacti waxay sidoo kale ku habboon yihiin casaan "Crystal", laakiin xisaabinta waa in aysan ka sarraynin 0.3 g oo bacriminta halkii litir oo biyo ah.
Inta lagu jiro xilliga nasashada, dhirta uma baahna xaddi badan oo walxo macdan ah. Laga soo bilaabo hababkan loo isticmaalo "Crystal", waxaynu ka soo bixi karnaa gabagabaynta, waxaanna xooga saarnaa xeerarka codsiyada qaarkood:
jaale iyo cagaaran ayaa loo isticmaalaa marxaladaha hore ee koritaanka miraha, sababtoo ah waxay gacan ka geystaan ​​horumarka nidaamka xididka;
bunni iyo casaan "Crystal" waxay ku fiican yihiin koritaanka dalagyada hooseeya ee hooseeya;
jaale waxay hagaajineysaa isbeddelka warshadeynta ka dib marka la isu tallaalayo ama marka ugu horreysa ee la furo;
Casaanku wuxuu leeyahay hal quraan si fiican u ah quudinta inta lagu jiro qaybta burooyinkeeda, sameysid ugxan iyo ubax.
Ilmahaaga isha ku haya dhirta indoor-ka ah sida: Peperomia, Howeya, Ziperus, Kampanula, Achmeya, Orchid, Plumeria, Ayrichrison, Scintidsus, Philodendron, Aspidistra, Epiphyllum, Indian Azalea, Clivia, Croton, Agave, Peppermaran, Maranta, Zeerae, Pellonia, Maranta, Peppermaid ciriiri
"Crystal" waxay leedahay faa'iidooyin badan:
Inkastoo ay tahay bacriminta kiimikada, ma keenayso waxyeelo deegaanka. Hanjabaadaha caafimaadka ma abuurayo.
Dhaqaale ahaan iyo si kafiican. Maaddooyinka firfircoon ee saameeya koritaanka dalagyada waxay sidoo kale gacan ka geystaan ​​tayada iyo tirada miraha beeraha waxayna sameysaa qiyaastii 95% miisaanka dharka.
Isticmaalka "Cristalona" ayaa sidoo kale kordhiya difaaca jirka.
Ka dib markii la quudiyo "Crystalone", quudinta degdega ah ee warshadda iyo ficilcelinta falcelinta biochemical ayaa dhacaya.
Waxay isku daraysaa Bacriminta iyo macdanta kale.
"Crystal" waxay ka caawisaa yaraynta saameynta xun ee cayayaanka ee dhirta.
Bakeeriga "Crystal" waa mid aad u fudud in la isticmaalo iyadoo ay ugu wacan tahay burburinta deg dega ah ee kristantalka iyo xisaabinta fudud ee jaangooyooyinka.
Waxay leedahay faa'iidooyin badan oo ku saabsan dawooyinka kale, iyo waxa ugu muhiimsan waa amniga jawiga bey'ada u dhow. Noocyada kala duwan waxay suurtogal u tahay inay si sax ah iyo si sax ah u caawiyaan dhirta marxalad kasta oo horumar ah.